Curata: Waxyaabaha ku habboon ee ku habboon ganacsigaaga. | Martech Zone
Curata waa software kaamil ah oo ka kooban, kaa caawinaya inaad si fudud u adeegsato hel, abaabul oo wadaag waxyaabaha ku habboon ganacsigaaga.
Soo koobidda mawduucu waa farshaxanka iyo sayniska helitaanka iyo wadaagida waxyaabaha tayada leh ee ku saabsan mowduuc gaar ah. Curation wuxuu kaa caawinayaa inaad dhisto dhagaystayaal. Markaa waxaad haysataa koox tiro badan oo aad la wadaagi karto waxyaabaha aad ka kooban tahay, isla markaana faafin kara hadalka. via Neicole Crepeau oo ku saabsan Qancin iyo Beddel
Raadi - Curata waxay si isdaba joog ah u qarineysaa shabakada si loo aqoonsado waxyaabaha ku habboon ganacsigaaga. Barxaddu waxay kaa caawineysaa inaad ogaato waxyaabo cusub oo macne leh oo khadka tooska ah, nadiifiya oo aad u maamusho qulqulka mawduuca adoo hagaajinaya oo hagaajinaya ilaha isla markaana aad u hagaajineyso
daahfurka - barashada dookhyada nuxur ahaan si aad uhesho.
Abaabul - Kataloojiyada waxay ka kooban yihiin si caqli-gal ah si aad u hesho waxa aad raadineyso. Macluumaadka waa la isugu geyn karaa oo la kala sooci karaa sidaa darteed si fudud ayaa loogu heli karaa talooyin lagu xoojinayo SEO-gaaga iyo ka-qaybgalka dhagaystayaasha. Waqti ka dib, madalku wuxuu dhisayaa arjiga kaydka si loo kordhiyo hagaajinta mashiinkaaga raadinta.
Share - Waxay u qaybisaa waxyaabaha mid, qaar ama dhammaan meelaha aad ka tagto ee khadka tooska ah. Waad sharxi kartaa, habeyn kartaa oo aad faallo ka bixin kartaa waxyaabaha aad ka kooban tahay, waxaad u daabici kartaa dhagaystayaashaada goorta, meesha iyo sida aad u doorato oo aad u cabirto natiijooyinka si aad ugu sii darto gaarsiintaada dhagaystayaasha aad raadineyso.
Tags: maadooyinka la isku qurxiyoContent Suuqcuratadardargelintabarnaamijka xajintamadal daaweyn